Kedụ ka enwere ike ịnweta ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ? - Estonia - Tallinn - 1aviagem.com
Gara aga post: Ihe ị ga-eme na Gaborone - Botswana
Nkwupụta ọzọ: Anyị gbara nwanyị nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ ma weta Ndụmọdụ na Ndụmọdụ Coronavirus
Edebere 14 February 2020 site Römulo Lucena
Na njem mbụ anyị na Tallinn, isi obodo Estonia, mgbe anyị rutere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, ụgbọelu na-adịghị ahụkebe tụrụ anyị n'anya. N’ezie ihe ọ dị ka ya bụ na e mere ya ka ọ bụrụ otu n’ime ọdụ ụgbọ elu kacha dị jụụ ma maa mma ịnọ n’ime ya. Ekwuputara m n’oge njem m ole na ole ọdụ ụgbọ elu ndị yiri ka emebere maka ndị mmadụ. Ebe enwere mmekorita nke na-enye ohere imekorita ndi mmadu. Nke ahụ ga - agba gị ume n'ezie iji kwụsị ọgba aghara ma nwee obi ụtọ na nhazi nke ebe ahụ. N’ihi ya, m na-ahapụ ekele m maka ndị merela ma wuo otu n’ime ọdụ ụgbọelu kachasị mma ịnọ na ya, allgbọ elu Tallinn na Estonia. Tallinna Lennujaam (TLL)
Gịnịkwa mere ọdụ ụgbọ elu ji ajụ ezigbo oyi?
Maka na ọdụ ụgbọ elu ị nwere ebe izu ike. (Ok, ọdụ ụgbọ elu ọ bụla nwere oche ma ọ bụ ọzọ). Ma na nke a anyị na-ekwukwa banyere ịnweta ihe ndị a:
- piano maka ndị na - agafe ma na - achọ igwu egwu.
- Oghere iji nweta eziokwu mebere. Ebe ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe Estonia. Ha na-ekwudị na ọ bụ “ihe a na-ahụkarị ndị Estonia” Dị ka mkpọkọta, ma ọ bụ ịrịgo n’elu ugwu. Arụ ọrụ nke ọma.
- Tebụl ping pong nwere raketị na bọọlụ dị mma.
Na mmechi, na mgbakwunye na ihe ndị a niile, enwere mpempe akwụkwọ ozi na-akpọ gị ka ị bụrụ nwa amaala Estonia. Ma ọ bụrụ na ị maara Bekee, ha na-ekwe nkwa ime usoro a ka ọ dị mfe.
Agbanyeghị na m hụrụ n'anya ịbụ onye Brazil, a nwara m ọnwụnwa ịbụ nwa amaala Estonia. Nke a bụ naanị n'ihi nnabata anyị n'ọdụ ụgbọ elu.
Ka ọ dị ugbu a, ka anyị banye n'ihe kacha mkpa. Kedu otu esi ebufe njem ọha na Tallinn?
Ka anyị na-ahapụ ọdụ ụgbọ elu ma banye ụgbọ ala (ụdị ụgbọ oloko eletrik kwadoro) anyị na-achọ ebe anyị ga-azụta tiketi. O di nwute, ihe omuma ozi ahu di na Estonian, ma ekwenti enweghi akara. M wee chee: Ikekwe anyị akwụ ụgwọ n'ụgbọ okporo ígwè.
Mana nke ahụ bụ mgbe otu nwa okorobịa bịakwutere anyị ma malite ịsị na ụgbọ njem anaghị akwụ ụgwọ, na ya onwe ya tupu ya enweta kaadị obodo ya, ejirila ụgbọ njem ọha maka n'efu na ihe niile dị mma. Nke ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ụfọdụ mgbanwe anyị nwere ike iji ya n'efu.
N’ezie, echere m akụkọ a. O kpebisikwara ike ịchọpụta otú ọ si kwụọ ụgwọ tiketi ahụ. Ya mere, agakwuuru m onye na-akwọ ụgbọ mmiri ahụ ma jụọ ego ole ọ bụ.
O chighaara n’ebe m nọ dị ka à ga-asị na ọ maghị ihe m na-ekwu. M zoro aka na posta e dere ede n’obodo Estonian nke bara uru. 2 Euro. Ọ jụrụ m tiketi ole m mere signazed 2.
O nyere m tiketi abụọ ma alaghachiri na ebe anyị ntakịrị ihe iju anya na onye ọkwọ ụgbọala na-enweghị ike ịma uru ma ọ bụ ihe ego ahụ gbasara?
Mgbe ahụ amalitere m iche… N'ọdụ ụgbọ elu, ha na-anabata anyị nke ọma nke na o yiri ka anyị nọ n'ụlọ. Nwatakịrị ahụ kwuru na ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka tiketi ahụ ... Onye ọkwọ ụgbọala ahụ gosiri ụfọdụ amaghị ihe ọ ga-eme na ego ahụ. Nke ahụ ọ bụ eziokwu?
Traingbọ oloko, tiketi ụgbọ ala agaghị akwụ ụgwọ?
Ma n'eziokwu ọ bụ eziokwu ihe nwata ahụ kwuru! Gbọ njem ọha bụ n'efu, ee.
Kama, naanị maka ụmụ amaala Tallinn. Yabụ na mụ na ndị njem nleta ọ bụla ga-akwụrịrị ụgwọ ụgbọ njem ọha. Dị ka ụmụ amaala Estonia ndị ọzọ na-abụghị isi obodo, Tallinn. Mana ọtụtụ ụmụ amaala Tallinn na-eji ụgbọ njem ọha. Ọtụtụ mgbe ndị njem na-ahọrọ maka tagzi, ọrụ ịtụtụrụ họtel ma ọ bụ Uber. Ọ bụ ya mere o juru onye ọkwọ ụgbọ ahụ anya mgbe m gara ịzụta tiketi. Ọ maghị ya mbụ!
Okwesịrị ịkọpụta na ndị njem nleta aghaghị ịzụta tiketi ha wee kwụọ ụgwọ maka njem ahụ. Ahịa na-agbanwe, ma ọ bụrụ na ejidere gị na-enweghị tiketi na-efu 1 na 2 euro. enwere ike ịta gị ihe ruru euro 40. Tiketi na-abụkarị ọnụ ahịa kwa elekere. Ma enwere ike izuta tiketi nke bara uru karia oge. Maka ozi ndị ọzọ gaa na gọọmentị weebụsaịtị n'okpuru:
Kedụ ka ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ ga-esi nweta ego maka obodo ahụ?
Ajụjụ dị mkpa bụ: Oleekwa otú ha si mee ka o kwe omume?
Na ntinyeko nke ndi mmadu, inye ndi amaala ọ bụla ohere iji ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ, ọkachasị ndị na-achọ ọrụ ma bụrụkwa ndị nwere nsogbu gbasara ego, ihe nnabata njem a ka anabatara n'isi obodo Estonia. Obodo ahụ dịka ụlọ nyocha iwu ọha na eze. N'ụzọ dị oke egwu, n'agbanyeghị ndị njem akwụghị ụgwọ maka tiketi, enwere ịrị elu nke nde 20 na ego Tallinn, n'ihi ụba ejirila na njem ọha.
Enweghị nri ehihie n'efu
Ekwuputara m na enwere m obi ụtọ ịchọpụta nke a. Mana oleezi otu ụgbọ njem ọha a na-esi akwado onwe ya? Kedu otu esi ekwe omume, ebe ọ bụ na ntinye ego bụ isi sitere n'aka ndị ọrụ?
Azịza ya bụ n'ụzọ ejiri mee iwu ọha na eze a. Gọọmentị steeti Estonia na-atụgharị na Halllọ Nzukọ Obodo (gọọmentị obodo) ego maka iwu ọha. Emere mbufe a site na ịgụta ndị bi na ime obodo.
N'ihe banyere Tallinn, enwere ihe ijuanya ebe ndị Estonia gbagara Tallinn iji nweta nwa amaala ha ebe ahụ. Enwere mgbanwe dị ukwuu nke adreesị, ngagharị na-aga n'ihu. Nke a mechara mepụta nde euro 20 na ego ha gafere karịa mpaghara ụgbọ njem anabatagoro tupu ha ebido iwu ebumnuche njem. Nke bụ eziokwu bụ na ụmụ amaala niile na-atụ ụtụ isi, mana ọ bụghị ha niile na-eji ụgbọ njem ọha. N'ihi ya, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-abawanye na isi obodo na ndị obodo na-enweta ego nkwụghachi ụgwọ maka ndị bi na ya, ụtụ isi a na-akwụ na-emefu ego a. Na mgbakwunye, ndị ọbịa ndị na-akwụ ụgwọ maka tiketi ha.
Gịnịkwa mere e ji kee ọrụ a?
Na mgbakwunye na ebumnuche mbụ ekwuru, nke bụ maka ntinye ọha na eze ma mee ka ụmụ amaala niile na-eme njem n'efu na Tallinn, enwekwara mmetụta ndị ọzọ nke ihe a kpatara.
Mbelata 8% n'iji ugbo ala nke onwe.
Okporo ụzọ na-emekọrịta ihe. Na ndị ọkwọ ụgbọala nwere ndidi karịa n'ihe gbasara ije ụkwụ.
Mbelata ihe ọghọm, na mbelata ikuku ikuku site na carbon monoxide.
Nkwado 90% nke ndị Tallinn maka iwu a.
Ọ dị mma icheta na Tallinn abụbeghị obodo na-eme njem nlegharị anya, yabụ, usoro ụgbọ mmiri na-ejide onwe ya. Ọ bụghịkwa n'ihi ndị njem na-akwụ ụgwọ maka tiketi. Nke a bụkwa ahụmịhe ole na ole mmadụ nwerela ịhụ ka ụmụ amaala na-akpa ebe ebe ọhaneze na-enwereghị onwe ha.
Knowsnye mara, ikekwe ị nwere mkpali itinye Estonia na ederede gị? M na-ekwe nkwa na enwere ihe karịrị ezigbo ice cream n’ebe ahụ.
Echefula iso anyị na bọtịnụ na-acha ọbara ọbara dị ebe ahụ!
Yabụ, anyị na-ewetara gị ọdịnaya a n'efu.
Aga m anọ ebe a ruo oge ọzọ.
akụkọ ihe mere eme ọdụ ụgbọ Estonia free Tallinn Ụgbọ njem